Omama abaningi emva kokuvela kwengane bacabanga ngendlela yokusula iso elisha. Umbono yingxenye ebalulekile yomqondo kumuntu. Futhi sekuye kwagunjwa ngenxa yokuzalwa. Izinkinga ngamehlo azigcini nje ngokubangela ukunganaki ingane, kodwa esikhathini esizayo zizoletha izinkinga eziningi. Ngakho-ke, kubalulekile ukujwayela imithetho eminingana elula yokuhlanzeka kweso ezinganeni. Futhi nge periodicity ethile ukuqhuba lezo noma ezinye izinqubo. Eqinisweni, konke akunzima njengoba kubonakala. Futhi ungakwazi ngaphandle kwezinkinga zokunakekela kahle amehlo osana olusanda kuzalwa.
Umbuzo wokuqala omama abasha abanesithakazelo kuwo ukuthi ngabe udinga ukugubha amehlo endodana yakho nhlobo. Mhlawumbe ungakwenza ngaphandle kwalendlela? Emva kwakho konke, izinsana ngakho-ke zonke izinsuku ukugeza, qapha ukuhlanzeka nomkhathi endlini!
Empeleni, inqubo yokugubha amehlo ibhekwa njengesibopho. Akukhona ukuthi awukwazi ukukwenza ngaphandle kwalo, kodwa kunciphisa kakhulu amathuba okuba nezinkinga. Isibonelo, ukuphelelwa amandla. Ngakho-ke, kufanele ucabange ukuthi ungasula kanjani amehlo osanda kuzalwa. Ukulondeka okwengeziwe angeke kulimaze. Ngaphezu kwalokho, akukho ulwazi olukhethekile lwenqubo ngeke ludinge abazali abasha.
Izimo zingahluka. Futhi esimweni ngasinye kukhona inguqulo yokuthuthukiswa kwezenzakalo. Okokuqala, kufanele ucabangele isimo esilula kakhulu - lokhu kunakekelwa okujwayelekile kwamehlo wengane.
Ekuqaleni, kuyadingeka ukwenza inqubo encane ezinsukwini zokuqala komntwana wengane. Into ewukuthi ngemuva kwesibhedlela sokubeletha kuyothatha cishe inyanga (ubuncane) ukuqhuba ukuhlanzeka okuhlukile kwamehlo asana ukuze kuvikelwe. Azikho izinto ezikhethekile ezizodingeka kulokhu.
Kunokuba usule amehlo ezinsana? Odokotela banamuhla batusa lokhu ukwenza ngamanzi abilisiwe. Akusekho ukuthi igeleza. Ungayinqoba ngamanzi okuphuza, kodwa nalokhu akuyona indlela engcono kakhulu. Ukuhlanzeka okuyisisekelo ekuqaleni kudinga ukusula amehlo omntwana ngamanzi abilisiwe nsuku zonke.
Umbuzo olandelayo, okufanele ufundwe nakanjani, yindlela yokwenza. Kufanelekile kunoma yisiphi isenzakalo. Akubona bonke abazali abakwaziyo ukusula kahle izingane ezisanda kuzalwa. Eqinisweni, konke kulula.
Uma wenza izinqubo, kuyadingeka ukuthi usebenzise i-disk esebenziwe kahle noma i-tampon. Ngakho-ke akazange akhonze ngaphandle kwe-villi. Emehlweni, angabangela ukulimala okukhulu.
I-disc ye-cotton igxiliswa ngesisombululo (isibonelo, amanzi abilisiwe), bese icindezelwe kancane. Ngakho ukuthi uboya bekotini awunamanzi kakhulu, kufanele kube semanzi. Ngaphezu kwalokho, amehlo wengane ayahlushwa. Kukuphi ukuqondisa? Kudingeka ukuba kwenziwe ukunyakaza kusuka ekhoneni elingaphandle leso kuya ekona elingaphakathi. Ungasho kusuka esihlathini ukuya kumsakazo. Futhi ngokuqhubekayo, uma izinhlayiya ezithile zingashiywanga ngoboya bekotini, ngokunyakaza okuphansi, ukuqhuma noma inqwaba yothuli eduze kombhozi. Futhi emva kwalokho, ususe nabo nge-swab ekhishwe yocon.
Kusuka kokungcola nothuli
Kukhona into enjengokuthi "ukulala" noma "ukulala kokulala". Uma umuntu elele, i-clumps encane yokungcola nodothuli ayibutha emehlweni akhe. Ngokuvamile kuthiwa "insali yokulala." Into efana nalezi zithukuthezi zifana ne-pus. Kodwa empeleni akunjalo. Qoqa lawa amehlo emehlweni, emini, hhayi ebusuku. Futhi zivela kokubili abadala nabantwana.
Ungasula kanjani ilanga elisha, uma kutholakala lezi "zindlala zokulala"? Kunconywa noma sebenzisa amanzi abilisiwe ukususa izimbungulu, noma ngisho nokwenza ngoboya obomile ukotini / induku / isitampu. Inqubo yokunyakaza iyaqhubeka iyafana.
Ukwethuka akudingekile - kusukela "ekuphumeni kwephupho" akekho umuntu ophephile, kuyinto evamile kakhulu. Ngakho-ke, akukho ndlela ekhethekile akufanele ihlabe amehlo kwane.
Abazali bavame ukubuza imibuzo eminingi mayelana nokuhlanzeka kwezinsana. Qonda lesi sihloko kalula, uma ulalela odokotela. Abaningi banesithakazelo ukuthi kungenzeka yini ukusula amehlo ohlobo olusanda kuzalwa. Le nqubo ituswa ngabomama abanolwazi. Ikakhulukazi uma izinkinga zamehlo zaqala.
Eqinisweni, amaqabunga amaqabunga akenzi lutho olwenzela ingane. Futhi ingasetshenziselwa ukunakekela amehlo wengane esanda kuzalwa. Sincoma kuphela ukubekezela okubuthakathaka, hhayi okuqinile.
Sebenzisa le nqubo nsuku zonke akufanele kube. Odokotela abaphakamisa ukuthi basebenzisa itiye ukuhlanzeka kwamehlo wengane, cebisa le ndlela uma kunezinkinga nombono. Noma ukuvimbela.
Kunezinketho eziningana zokwelashwa - noma abazali bafaka kahle isikhwama setiyi futhi bayihlobisa amehlo wengane (hhayi kunconywa), noma itiye elibuthakathaka liphekwe lapho ibhuthoni ligaxwa futhi lisetshenziswe ngokwesiko esivele sisaziwa.
Ngingakuhlanza kanjani amehlo osana olusanda kuzalwa? Akunakwenzeka neze ukuphendula lo mbuzo. Ngokuvamile, uma kungenayo izinkinga ngamehlo, awukwazi ukuwashisa nhlobo (kusukela ezinyangeni ezingu-1-2, ukuthi izinyembezi zokuqala zizovela kanjani), noma ukuhambisa ngamanzi abilayo ajwayelekile.
Kodwa uma kungumbuzo wokutshala noma izinkinga, khona-ke kuzodingeka usebenzise izidakamizwa ezikhethekile kanye nezitho zomzimba. Esikhundleni sethiyi ebuthakathaka ingasetshenziswa ukuphatha, isibonelo, conjunctivitis, ukumnika kwamakhemikile. Ubulala kahle ama-microbes futhi usiza ngokushesha ukuqeda ama-pus emehlweni.
Uma kungekho-chamomile, ungazama ukusebenzisa itiye le-chamomile. Ukuphumelela kwesinyathelo esinjalo kuyaphansi, kodwa ezimweni ezibucayi kuyasiza. Ngakho chamomile - yilokho ongasula iso lakho elisha.
Yini enye ongayisula amehlo wengane esanda kuzalwa? "Furacilin"! Noma kunalokho, isisombululo sayo. Leli ikhambi elifanele kakhulu elisiza ukuqeda amehlo. Ikhubaza futhi ikhubaza amehlo kahle ngaphandle kokubacasula. Ilungele kokubili izingane kanye nabantu abadala. Akubangeli ubuthi, akulimazi amehlo ezinsana ezincane.
Kuyinto "Furacilin" eyasiza kakhulu ezinkingeni ezingabuka ezinganeni ezisanda kuzalwa. Sebenzisa isixazululo salesi sidakamizwa kufanele sibe ncamashi namanzi abilayo. Inqubo yokwelashwa kwamehlo kunconywa ukuba yenziwe izikhathi ezimbili ngosuku kuze kutholakale ngokuphelele. Njengesilinganiso sokuvimbela, "Furacilin" akudingekile ukusebenzisa, kuphela uma kunezinkinga ngamehlo. Isibonelo, kwakubuyiselwa ngaphandle kwesizathu noma ukudikibala kwaqala.
Yiziphi ezinye izeluleko ozizwayo? Odokotela bokuguqulwa komdala ngokubuza imibuzo mayelana nokuthi bangasula kanjani umntwana osanda kuzalwa, uma befisa, phendula ukuthi ungasebenzisa i-potassium permanganate. Isixazululo esilula salesi sici sisebenza njenge-disinfectant. Ngakho-ke, kufanele uzinake.
Ngempela, ngaphambi kokuba badle ngisho ne-potassium permanganate yezingane. Kodwa inqubekela phambili ayimi. Futhi odokotela abathile banamuhla babonisa ukuthi odokotela kuphela okufanele baphathe amehlo omntwana ngale ndlela. Bangakwazi ukuxazulula isisombululo esiphephile. Futhi phakathi nenqubo, akukho ukulimala okuyobangelwa. Kodwa abazali bafaka ingozi ngokushiswa okungalungile kwe-potassium permanganate ukuqinisekisa ukuthi ingane iyashisa. Ngakho-ke, kungenzeka ukuthi uphathe iso ngokuzimela ngalesi sici, kodwa akusikhuthazwa. Lena indlela engaphelelwe yisikhathi.
Futhi kunokuba asule amehlo omntwana ngaphambi kokubuya ekhaya esibhedlela? Abazali akufanele bacabange ngakho. Phela, odokotela ngokwabo benza le nqubo.
Ezibhedlela zokubeletha, isisombululo esibuthakathaka se-potassium permanganate sisasetshenziswa . Lokhu sekushiwo kakade. Abazali ngenkathi bekhona kulesi sikhungo sezokwelapha akufanele bacabange ngombuzo obhekene nawo. Ngokujwayelekile, zonke izincomo zokunakekela ingane zisho ngesikhathi sokukhishwa. Futhi abantu abaningi abaphikisanayo abangeke batusa ukusebenzisa i-manganese yedwa.
Ngingakuhlanza kanjani amehlo osana olusanda kuzalwa? Abanye bayeluleka ukusebenzisa ubisi lwebele. Uma unina unalo, ngakho-ke ukuze uvikele izifo ezithathelwanayo zeso, ungabeka ubisi oluncane emehlweni omntwana. Ngaphandle kwalokho, ungasebenzisa i-cotton pad noma isitampu eswakanyiswe uketshezi olunikeziwe.
Mhlawumbe, isifuba sitholwa kuphela ngabantu abangenayo imfundo yezokwelapha. Odokotela bangenakwenzeka ukunikeza inketho enjalo. Indlela yokusula amehlo wengane esanda kuzalwa? Kunezinketho eziningi. Kodwa akukhuthazwa ukusebenzisa ubisi lwebele. Kungcono ukusebenzisa i- "Furatsilinom". Ukusebenza kwaleli thuluzi kufakazelwa. Kodwa uma kwenzeka ubisi, lesi simo sinengqondo. Ngakho-ke, ukubeka engozini impilo yengane akufanelekile.
Iphutha le-Runny elinamafutha. Amazinyo aqoshiwe: kanjani ukusiza?
Izidakamizwa ezisebenzayo kunazo zonke zezingane ezisuka eminyakeni emibili
Garden hose: incazelo izinhlobo eziyinhloko nezici zabo
Indlela yokupheka ushizi ekhaya? Recipe for ushizi kanzima ekhaya
Kanjani shugaring indlu: Izibuyekezo
Amazwibela "Asi" - indaba ozithandayo